အသုဘမြင်တာ မင်္ဂလာ	Posted on April 30, 2011	by mettayate သက္ကရာဇ် (၂၀၀၀) ခုနစ်တွင် အရှင်ဇ၀န မြိတ်မြို့မှ ရွာတစ်ရွာတွင် နှစ်ညဟောရန် စီစဉ်ထား၏။ ထူးခြားမှုတစ်ခုကား ရွာ၏သချိုင်းသည် ဘုန်းကြီးကျောင်းနောက်မှာ ရှိနေ၏။ ထို့ကြောင့် အသုဘချလျှင် ကျောင်းဝိုင်းထဲမှ ဖြတ်သွားကြရ၏။ ထိုအဖြစ်ကို ကျောင်းထိုင် ဘုန်းကြီးက သဘောမကျ။ တစ်နေ့ခင်းတွင် ကျွန်ုပ်ရှေ့၌ အသံထွက်ပြီး ညည်း၏။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ မှတ်ကျောက်. Bookmark the permalink.	← ကျောက်ဆင်းတု ပြဿနာ
One Response to အသုဘမြင်တာ မင်္ဂလာ
Khin Maung Zaw says:	March 9, 2012 at 2:48 am	I would like to know this post,got this dama knowledge from you unexpectedly